Inkampani yethu - NINGBO ACE MACHINERY Co., Ltd.
Imishini yeNingbo ACE njengomhlinzeki wesixazululo sokwakha imishini enesipiliyoni seminyaka engama-25 .Ngomkhiqizo oyinhloko: Isidlidlizi sokhonkolo, i-poker shaft, i-Plate compactor, i-Tamping rammer, i-Power trowel, i-Concrete mixer, i-Concrete cutter, i-steel bar cutter, i-steel bar bender ne-mini excavator .
Sine 6 yokuthengisa omuhle kakhulu International, 2 onjiniyela abaneminyaka engu-15 nakho, 4 abaklami, 3 QC futhi 1 QA, ukwenza iqembu kungase kutholakale, ochwepheshe abanolwazi ulawula ngokucophelela izinto ezibalulekile ezihilelekile inqubo ucwaningo umkhiqizo kanye nentuthuko. Ukwakhiwa kwenoveli namathuluzi wokuhlola angenisiwe aqinisekisa ukusebenza okuvelele nokuqina kwemikhiqizo yethu.
Njengenkampani egxile kumakhasimende, singathanda ukuzibeka ezicathulweni zamakhasimende ukuqonda izimo zawo njengoba siletha insizakalo eqondene namakhasimende futhi siqhubeka nokwenza kahle kwethu kwansuku zonke. Kwa-ACE, siyaqonda ukuthi ukuthengisa umshini wethu kumakhasimende akusikona ukuphela kwesivumelwano kepha kuyisiqalo esisha sobambiswano oluyigugu. Lapho uthenga umkhiqizo wethu, amakhasimende athola ngasikhathi sinye izinzuzo ezilandelayo.
1. Insizakalo yekilasi lokuqala eqenjini elihlelekile, elithengisiwe
2. Isiqinisekiso sekhwalithi yonyaka owodwa
3. Intengo yokuncintisana
4. Ukulethwa komkhiqizo okusheshayo
5. Ulwazi lomkhiqizo nokuqeqeshwa kwamathuluzi okuthengisa
6.Oda ye-OEM nedizayini eyenziwe ngezifiso
7. Ukuphendula ngokushesha emibuzweni yamakhasimende
8. Imikhiqizo esezingeni eliphezulu ethunyelwe emazweni angaphezu kwama-50
Injongo: Sihlinzeka ngemishini yokwakha emisha ezokwenza umsebenzi wakho ube lula